Nepse Online नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कमजोर, हरेक पटक रेकर्ड तोडिँदै, नेपाललाई किन छ घाटा? – nepseonline
Tuesday 05-24, 2022, 4:56 pm
नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कमजोर, हरेक पटक रेकर्ड तोडिँदै, नेपाललाई किन छ घाटा?
काठमाडौं। सबैभन्दा कमजोर रेकर्ड तोडेपछि सात दिनसम्म केही मत्थरिएको नेपाली रुपैयाँले मंगलबार फेरि पुराना सबै रेकर्ड तोडेर एकदमै सस्तो मूल्यमा झरेको छ। नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ उच्चतम ११२ रुपैयाँ ५६ पैसा पुगेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको माग बढेपछि नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै कमजोर देखिएको हो। सोमबार एक डलरको भाउ ११२ रुपैयाँ १६ पैसा थियो। मंगलबार सर्वाधिक कमजोर भएको हो।